मेलम्चीका ३४ घर पहिराको जो’खिममा ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ६, २०७८ आइतबार 230
काठमाडौं : लगातारको वर्षाले मेलम्ची नगरपालिका– ८ केउरानीका ३४ घर जो’खिममा परेका छन् । पहिराका कारण खैरेका २७ र छाँयालीका सात घर जो’खिममा परेका हुन् । स्थानीयवासी कान्छामान दोङका अनुसार पोहोरदेखि नै पहिरो जान
थालेका ठाउँमा यसपाली पनि पहिरो आएर खैरेका बस्ती जो’खिममा परेका हुन् । निरन्तर पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीयवासी त्र’सित भएको उहाँले बताउनुभयो । पटकपटक वडाका प्राविधिकलाई यसबारे जानकारी गराउँदा पनि चासो नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । वडा नं ८ का वडाध्यक्ष ठकराज गिरीले उनीहरुलाई तत्काल अस्थायी बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराई बस्तीको विज्ञसहित अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको तर सुनुवाइ नगरेको उहाँको भनाइ छ । वडाध्यक्ष गिरीले तत्काल नगरपालिकामा जानकारी गराइ प्रभावितलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भूर्गवविद्को टोली ल्याई बस्तीको अध्ययन गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पहिराले प्रभावित मेलम्ची–६ नेपाने बगरटोलका १७ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । स्थानीयवासी भीमसेन थापाको आग्रहमा मेलम्ची–४ थकनी निवासी गरिमा भोएज ट्राभलका सञ्चालक हाल इटालीमा रहनुभएका रवीन्द्र अर्यालमार्फत प्राप्त रु एक लाख १७ परिवारलाई वितरण गरिएको हो । घरवारविहीन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा परिवार सङ्ख्याका आधारमा पी’डित घरपरिवारलाई नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
Prev‘वामदेव गौतम एमालेमै हुनुहुन्छ, एमाले छोड्यो भनेर चरित्र ह’त्या गरियो’ : सचिवालय
Nextमुलुकभर थप १९२० जनामा को’रोना पुष्टि, २४ जनाको मृ’त्यु !
Totally free Adult Cams – Where to get the Hottest Camera Girls in the area